डब्ल्युएचओले भन्यो, ‘कोरोना अन्त्य हुन गाह्राे छ’ « Naya Page
प्रकाशित मिति : 21 May, 2020 9:30 am
काठमाडौं, ८ जेठ । अमेरिकामा कोरोनाविरुद्ध मानिसमा गरिएको खोपको प्रारम्भिक नतिजा सफल आएको सुखद समाचारले विश्वलाई कोरोना महामारीबाट मुक्ति मिल्ने आशा जागिरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठनले भने तत्काल कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्य नहुने चेतावनी दिएको छ ।
विश्वमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्नुको सट्टा झनझन् बढेको भन्दै डब्ल्युएचओले कोरोना महामारी अन्त्य हुन निकै लामो समय लाग्ने देखिएको बताएको छ । विश्वमा कोरोना संक्रमितको ग्राफ बढिरहेको बताउँदै महामारी अन्त्य हुन निकै समय लाग्ने देखिएको डब्लूएचओका महानिर्देशक डा. टेडरोज आध्यनोम गेब्रेयेसोसले बताएका छन् ।
‘पछिल्लो २४ घण्टामा डब्लूएचओलाई प्राप्त तथ्यांकअनुासर विश्वमा एक लाख ६ हजार नयाँ केस थपिएका छन्, यो एकै दिन थपिएको संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो,’ बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा डा. टेडरोजले भने, ‘झण्डै दुई तिहाइ केस त मात्रै चार देशका हुन् ।’